Johns dheer: qaab nigis diiran oo shaqeynaya | Ragga Stylish
Soosaarayaasha dharka waxay bixiyaan awood ay ugu jaangooyaan dharkaaga hoose dhadhankaaga iyo baahiyahaaga fudayd iyo raaxo aan weligeed hore loo arag. Iyo qaabka na khuseeya munaasabaddan, oo loo yaqaan johns dheer, waxay ku taal dhinaca farsamada iyo waxqabadka badan ee hadda jira.
Aynu aragno waxa aad ka filan karto jooniska dheer, faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda iyo duruufaha gaarka ah ee aad uga faa'iideysan karto astaamaha dharkan. Maaha ku wareejinta johnyada dhaadheer, laakiin waa adeegsiga marka munaasabadu ku baaqeyso.
1 Muxuu johnku dheer yahay?
2 Faa'iidooyinka johns dheer
2.1 Jaakad badan
2.2 Xakamaynta huurka
3 Immisa ayey ku kacaysaa johns dheer?
Muxuu johnku dheer yahay?
El Dharka hoose Waa dhar nigis ah oo, sida magaciisu muujinayo, aan ku sii nagaan doonin gumaarka ama bowdada dhexdeeda, laakiin waa halkii lugaha ayaa hoos ugu dhaadhaca anqawyada, sida haddii ay tahay surwaal dhaadheer. Ku habboon ciyaaraha isboortiga iyo la dagaallanka qabowga iyo qoyaanka, waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada jirka.
Dharka fidsan ayaa guud ahaan loo isticmaalaa soosaarkooda. Intaa waxaa dheer, waxay ku jiraan sifooyin farsamo oo loogu talagalay xakameynta qoyaanka iyo heerkulka jirka. Marka la soo koobo, jooniska dhaadheer waxay aad ugu egyihiin joornaaladaada fidsan iyo feeryahannada, iyadoo farqiga kaliya uu yahay inay u dhaadhacaan anqowga iyo xaalado badan waxay ku jiraan tayada farsamada.
Faa'iidooyinka johns dheer
Miyaad ka fikireysaa inaad ku darto joonniisyo dhaadheer ururinta dharkaaga? Hadday sidaas tahay, Kuwa soo socdaa waa dhammaantood faa'iidooyinka (iyo sidoo kale xoogaa khasaaro ah) oo ay tahay inaad ka feejignaato:
Faa'iidada ugu weyn ee jooniska dhaadheer marka loo eego qaababka kale waa taas bixi dareen diirran inta lagu jiro bilaha qabow. Tani waxay u dhacdaa laba sababood:
Xilliga jiilaalka, waxaa jira xulashooyin kala duwan oo dharka loogu kala dabooli karo qaybta sare ee jidhka, taas oo keenaysa in diirimaad badan jidhka iyo gacmaha la siiyo. Si kastaba ha noqotee, isla taasi kuma dhacdo qaybta hoose ee jirka, johns dheer oo ka mid ah xulashooyinka yar ee lagu dari karo lakab dheeraad ah oo diirimaad lugaha ah.
Si loo sii kordhiyo ka hortagga qabowga, soo saarayaasha qaar waxay isticmaalaan wax kayar merino dhogorta soo saarista joonyadooda dhaadheer. Noocyada noocan ah ee dharka ah ayaa ah kuwo xiiso leh haddii aad qorsheyneyso inaad waqti badan ku bixiso bannaanka bartamaha heerkul aad u hooseeya. Waa in la ogaadaa in dhar sida xariir sidoo kale la isticmaalo, kuwaas oo lagu daro waxyaabo kale, waxay keeneysaa surwaal dhaadheer oo diiran inta ay iftiinka yihiin oo neefsanayaan
Dhanka kale, soosaarayaasha qaarkood kuma qanacsana kordhinta dhererka lugaha qoraalkooda si ay u gaaraan anqawyada, laakiin sidoo kale waxay ku daraan farsamo gacan ka geysaneysa xasilinta heerkulka jirka ee qofka xiran. Marka la soo koobo, ku dar diiran xaaladaha aad u baahan tahay xulafo kaa caawiya inaad la dagaallanto heerkulka hooseeya.
Yooxanno dhaadheer qaarkood ayaa qoyaanka ka celiya, tayo aad wax badan ka faa'iidi karto marka aad jimicsiga jimicsiga sameyso sida orodka arinta dhidid dartiis. Xakamaynta heerkulka jirka ee ay bixiyaan moodellada qaarkood waxay hagaajin karaan waxqabadkaaga wax yar adoo kululeynaya markaad qabowdo oo aad qaboojiso marka jimicsiga kaa dhigo casaan kulul.
Haddii aad rabto inaad u isticmaasho tababarka, tusaale ahaan dharka gaagaaban, waa inaad hubisaa in, marka lagu daro kuleylka iyo raaxaysiga, dharkaaga dhaadheer ay leeyihiin saameyn casri ah.
Sida moodooyinka gaagaaban, qoraal kooban oo wanaagsan waa inuu bixiyaa taageero sare iyada oo aan loo sadqeynin hal iota oo raaxo leh. Marka la soo koobo, waa inay ku habboon yihiin sida ugu macquulsan ee jirka laakiin adiga oo aan kaa dhigin inaad dareentid culeys. Dabiici ahaan, halka taageerada feeryahannada iyo warbixinnada kooban ay ku egyihiin aagga kore, jooniska dhaadheer waxay u kordhin karaan lugta oo dhan.
Eeg inaad tagto qolka jimicsiga
Yooxannada dhaadheer waxaa loogu talagalay aragtida shaqaysa. Sida dharka badankood noocan oo kale ah, tani macnaheedu waxa weeye in nashqadeyntiisa iyo saameynta ay ku leedahay jirka aysan u qurux badnayn sida xulashooyinka ragga ee kale. Si kastaba ha noqotee, sheegashada soo-saareyaashu maahan inay bixiyaan xarrago, laakiin waxay daboolayaan baahiyo taxane ah, sidaa darteed marka la eego dareenkaas waxba laguma eedeyn karo. Kaliya waa inaad tixgelisaa waxa ay yihiin oo aad u isticmaashaa si waafaqsan.
Immisa ayey ku kacaysaa johns dheer?
Waxa ugu horeeya ayaa ah inaad go’aansato inta aad diyaar u tahay inaad maal gashato. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad iska tuurto tiro aad u tiro badan si aad xoogaa u saarto xoogaa yar. Laakiin intee ayey ku kacayaan? Xaqiiqdu waxay tahay, sida wax kasta oo xiriir la leh moodada, suuqa wuxuu bixiyaa joonis dheer oo loogu talagalay dhammaan jeebabka. Laakiin waa in la ogaadaa inay ka qaalisan yihiin qaababka kale.
Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 15 ilaa 150 euro. Haddii aad diyaar u tahay inaad qarash gareyso wax kabadan 100 euro, waxaad kaheli kartaa johannooyin dhaadheer oo dhaadheer dukaamada internetka sida Patagonia. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale ka heli karnaa qaabkan dharka hoosta ragga ee ururinta qaar ka mid ah silsiladaha moodada, taas oo inta badan keenta qiimo jaban. Taasi waa kiiska shirkadda Jabaan ee Uniqlo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Johns dheer
Faa'iidooyinka khamriga cas